Delhi waa mid ka mid ah afar magaalo weynta weyn ee Hindiya. Iyada oo tirada mar walba sii kordheysa ee shirkadaha IT, warshadaha, warshadaha iyo bangiyada, Delhi ayaa u soo muuqday mid ka mid ah xarumaha waxbarasho iyo shaqo waaweyn. University of Delhi waa caan ah oo dhan Hindiya for heerarka waxbarashada. Iyada oo imtixaanka guddiga agagaarka geeska, ardayda ka dalka oo dhan ayaa ka shaqeynaya aad u adag si loo sugo gelitaanka mid ka mid ah kuliyadaha, kuwaas oo galay.
Haddii aad tahay hal arday oo kale raadinaya is Galinay kulliyad ee Capital Qaranka, ka dibna aad tahay meel sax ah. -Ku hoos qoran yihiin qaar ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya xulufo la ah Jaamacadda Delhi. Kani waa xalka one stop for dhan weydiimo sida koorsooyinka bixiyeen aad a, shuruudaha iyo qaabka lacagta ee ka mid ah kuliyadaha caanka ah ee du.
St. Stephen ee College, New Delhi
A Christian College hoos Church of North India, St. Stephen ee College waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee North India. La aasaasay by Mission Cambridge ay u Delhi, college waxay bixisaa noocyo kala duwan oo Under-Graduate iyo koorsooyin Post-Graduate:
B.A. dhaqaalaha (Hons)
B.A. taariikhda (Hons)
B.Sc. xisaabta (Hons)
B.Sc. barnaamijka (Sayniska jirka)
M.A./M.Sc. Hawlgallada Research
Iyada oo guud ahaan 14 waaxyaha, kulliyadda ayaa had iyo jeer lagu badan doonatay. offs Goo u sarraysaa sida 98% ayaa la soo sheegay. Xitaa barnaamijyada sida B.A. offs cut tago sarraysaa sida 97%. college waxay leedahay arday ordi gacanta meelaynta taas oo aadka u firfircoon oo si joogto ah wuxuu qadaray dadaalada ku wajahan ardayda gargaar meelaynta.
Banking and waaxda dhaqaalaha shirkadaha sida Brothers Lehman iyo Merrill Lynch, London ka qaybgalay habka shaqaalaynta. Haddii aad ku qorsheeyneyso in gelitaanka helitaanka mid ka mid ah jaamacadaha ku hoos Du, markaas St. Stephen waa maalin kasta oo doorasho wanaagsan!
AKHRI SIDOO KALE: 10 Talooyin gaar ah College Ardayda
liiska Next waa Ramjas College. Mid ka mid ah horeyn saddex kulliyadaha lagu sameeyay jaamacada Delhi, Ramjas College waa jaamacad kale oo caan ka yar du. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo koorsooyin laga bilaabo B.A. si B.Sc. Popular hoos-graduate iyo post-graduate koorsooyinka ay bixiyaan kuliyadaha yihiin :
B.A. (Hons) dhaqaalaha
B.A (Hons) taariikhda
B.A. (Hons) Cilmiga Siyaasadda
B.Sc. (Hons.) xisaabta
B.Sc. (Hons) cilmi barasho dhir
B.Sc (Hons) cilmi barasho xayawaan
B.Sc. (barnaamijka) Physical Sciences
ka koorsooyinka kor ku qoran marka laga reebo kulliyadda sidoo kale bixisaa Master of Arts in Bengali, English, Hindi, Philosophy, Sanskrit, dhaqaalaha, taariikhda, Cilmiga Siyaasadda, Music iyo Research Hawleed. Master of Science in Physics, Chemistry, cilmi barasho xayawaan cilmi barasho dhir. xisaabta, Statistics iyo Research Hawleed waa doorasho kale oo caan ah oo codsadeyaasha. kuwaas oo dhan marka laga reebo, Machadka kale oo ay bixisaa degree ah ee Master of Commerce.
Iyada oo gacanta meelaynta aadka u firfircoon la odhan jiray 'Pinnacle', kulliyadda ayaa had iyo jeer isku taxalujisay in ay bixiyaan gargaar mustaqbalkiisa inay Qalinjabiyeyaasha ay. abaabulka siminaaro, wadahadalo pre-meelaynta, kalfadhi oo wareysi tijaabada ahayd ee ardayda ku jira qaar ka mid ah hawlaha ay gacanta meelaynta abaabulay.
offs Goo ayaa aad u sarreeya, waayo, Ramjas College aad sida kulliyadaha kale ee hoos Du. Ardayga ammaanka ka badan 96% marks in baaritaanka guddiga awoodi doonaan in ay ka aamin gelitaanka kulliyadda aqoonyahanada ah ee du. Sidaas ardayda, jiid sharaabaad kor iyo weeraraan looxyada aragti ah si uu u helo oggolaanshaha halkan!
liiska Next waa Shri Ram College of Commerce! Horaantii loo yaqaan 'College Commercial’ SRCC waa IIT ardayda ganacsiga. Iyadoo 304 meeleyn guul sheegay in sannadkii la soo 2016, kulliyadda ayaa gacanta meelaynta aad u firfircoon. college waxay bixisaa noocyo kala duwan oo koorsooyin laga bilaabo B.Com (Hons.) si B.A (Hons) in dhaqaalaha.
AKHRI SIDOO KALE: Sida loo qoro A ku guuleystay Qormo COLLEGE ARJIGA?
liis dhamaystiran oo koorsooyinka ay bixiyaan qaabilsan waa sida soo socota :
B.A. dhaqaalaha (H)
In 2017, offs ee cut ahaayeen ee kala duwan ee 95% – 97%.
kaabayaasha qaabilsan ayaa waxaa inta badan ku yidhi dhigma heerarka caalamiga ah! Dawladdu waxay of Delhi ayaa aqoonsan campus sida mid ka mid ah dhismayaasha dhaxal ahaan ee Capital Qaranka ee! Mid ka mid ah sifooyinka lagu garan qaabilsan yahay 'Hawlgallada Global Business ay’ unit.
Qaabilsan ayaa had iyo jeer ahaa dooqa koowaad ee heysa baaritaanka guddiga. Waxaa la kulmo ardayga laga filayo tan iyo waqti aad u dheer oo sii wadi doona in ay sidaa sameeyaan in mustaqbalka aad u.
Hindu College waa jaamacad kale oo caan ka yar University of Delhi. Waxaa lagu abaal A fasalka + in darajooyinka ugu horeysay wareega by NAAC ah.
Iyada oo offs cut bilowda u sarraysaa sida 98%, waa mid ka mid ah kuliyadaha ugu adkaa si aad u hesho! college waxay bixisaa koorsooyin Humanities, Sciences, Ganacsiga iyo Sayniska Bulshada. Iyadoo 16 waaxaha laga bilaabo Ingiriisi si Chemistry, college waxay bixisaa noocyo kala duwan oo koorsooyin :
B.A. (Hons) xisaabta
Ugu danbayntii waxa aanu u, Hindu College ayaa sidoo kale si siman wanaagga iyo doonteen. Iyada oo gacanta meelaynta aadka u firfircoon, halkan arday badan ayaa xaqiijisatay shaqooyinkooda riyo.
Kuwani waa qaar ka mid ah jaamacadaha caan ka yar University of Delhi. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku guul dareysato in aad hesho mid ka mid ah kuliyadaha, kuwaas oo galay, ma heli qalbi jabine! Waxaa jira wax badan oo ka mid ah kuliyadaha kale oo si siman u fiican yihiin marka ay timaado meeleynta iyo tas-hiilaadka kale ee ardayga.
5 Talooyin Insider for Helitaanka Fasalada Good ee College
Sridevi Qormo, Biography, muuqaal, Qoyska, Movies Super-hit, dhicistii (Shridevi Bollywood Actor) »